Wafti Kasocda JWXO oo Tuulada Qorra Lagusoo Dhaweeyay.
Waxaa Tuulada Qorra oo Dagmada Dhanaan ee Gobolka Shabeelle katirsan si diiran loogu soodhaweeyay Wafti balaadhan oo Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia (JWXO) katirsan.
Waftigan oo uu hogaaminayay Hogaanka Arimaha Bulshada ee Gobolka Shabeelle Mudane Maxamed Garaad ayaa socdaal shaqo kutagay Tuulada Qorra, halkaas oo ay shir balaadhan uqabteen Shacabka Gobonimada jecel ee Tuulada Qorra kudhaqan.
Gudoomiyaha Xafiiska JWXO ee Dagmada Dhanaan Naftii Hure Axmednuur Qaalib oo shirka furay ayaa makarafoonka kusoo dhaweeyay Hogaanka Arimaha Bulshada ee Gobolka Shabeelle halgame Maxamed Garaad, wuxuuna mudane Garaad shacabka Tuulada Qorra kudhaqan uga war bixiyay marxalada nabad kuhalganka ah ee lagalay iyo kaalinta shacabka looga baahan yahay.
Sidoo kale Gudoomiyaha Xafiiska JWXO ee Dagmada Dhanaan halgame Axmednuur Qaalib ayaa shacabka Tuulada Qorra kudhaqan kubooriyay in ay Midnimada iyo walaalnimada ka shaqeeyaan taas oo ah wax kaliya ee dadka iyo dalka lagu hor marin karo.
Guntii iyo Gunaanadkii Waftigii JWXO ee Tuulada Qorra gaadhay iyo shacabka ree Qorra ayaa kubalamay in horay looga dhaqaaqo meesha lajoogo si guul loogaadho.
December 27th 2019, 3:01 pm